» कसरी बाँच्छन् दलहरू ?
८ पुष २०७५, आईतवार १४:३५
केही अगाडि कान्तिपुरमा कम्युनिस्ट नेता घनश्याम भुसालको लामो लेख छापियो । शीर्षक थियो, ‘कसरी बाँच्छ कम्युनिस्ट पार्टी ?’ त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो । नेपालका कम्युनिस्टहरूमा जेजस्ता वैचारिक तथा राजनीतिक संकट, गुट, स्वार्थ र टकराव देखिँदै छन्, त्यसले स्वभावत: यस्ता प्रश्न पुन:उत्थान हुन्छ । हाम्रा कम्युनिस्टहरू हेर्दा लाग्छ, सबैभन्दा धेरै गफाडी, ढोंगी र संकीर्ण बन्नु कम्युनिस्ट हुनु हो । अरूलाई मान्छे नगन्नु र सम्पूर्ण ज्ञानको स्रोत आफूमा निहित देख्नु कम्युनिस्ट हुनु हो । बाहिर हुँदै नभएको भद्रता प्रदर्शन गर्नु र भित्रभित्र सबैभन्दा छुद्र हुनु कम्युनिस्ट हुनु हो ।
विचारमा बहस भएन । राजनीतिक मुद्दामा टेबल ठोकाठोक भएन । पार्टी जीवनमा सिर्जनशीलता देखापरेन । संगठन र कार्यकर्ता एजेन्डामा परेनन् । भुइँका मान्छेको कुरा भएन । भयो त उही पार्टीसत्तामाथि वर्चस्वको षड्यन्त्र । दाहिनेतिर देउवाले जगत हँसाए । देब्रेतिर ओली महोदयलेउटपट्याङ कुरा गरेर टालटुल पारे । पार्टीहरू गतिशील हुनुपर्छ । उसका प्रत्येक निर्णय त्यो युगको गति र आवश्यकतासँग एकाकार हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । पछिल्लो समय र त्यसका संकटलाई समाधान गर्न पार्टीहरू सचेत, सिर्जनात्मक र गतिशील हुनुपर्छ । जस्तो– सरकार गतिशील देखिएको छैन । विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
भुइँमान्छेका दैनिक संकट जटिल बन्दै छन् । भ्रष्टाचार तीव्र छ । संघीयताका चुनौती देखिँदै छन् । राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने बृहत्तर योजना चाहिएको छ । रोजगारी सिर्जना मुख्य आवश्यकता हो । सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणका योजनालाई प्रभावकारी बनाउनु छ । सहरी जिवनलाई सभ्य र सुसंस्कृत गर्नु छ । भूराजनीतिक जटिलता मिलाउनु छ । अनेक विषय छन् । तर यस्ता विषयमा कुनै बैठकमा चर्चा भएन । विषयलाई टालटुल र छोपछाप पारियो । हाम्रा दलहरू पुराना भए । जिम्लिए । तिरमिराए । उनीहरूसँग पछिल्लो आवश्यकता र मुद्दालाई देख्ने क्षमता सकियो । हाम्रा पुराना दलहरूसँग फेरिएको समाज र त्यसका सपनाबीच एकाकार हुने क्षमता सकियो । लाग्छ, उनीहरूले समाजसँगै चालमा चाल मिलाएर हिँड्ने सामथ्र्य गुमाए ।
कांग्रेसहरू कम्युनिस्टहरूको युग सकिएको कुरा गर्छन् । कम्युनिस्टहरूलाई लाग्छ, कांग्रेसको युग सकियो । वस्तुत: यी दुवैको युग सकिएको छ । युग सकिनु सरकार बनाउनु वा नबनाउनु होइन । चुनाव जित्नु वा हार्नु होइन । बरु सन्दर्भ सकिनु र परिणामविहीन हुनु हो । हाम्रा पुराना पार्टीहरूको जन्मकुण्डली फरक छ । कांग्रेस र कम्युनिस्टका रूपमा उनीहरूको परिचय फरक छ । उनीहरूका भगवान् फरक छन् । विचार र सिद्धान्तका पोथीहरू फरक छन् । उनीहरू विभिन्न रङ र वादमा आफूलाई फरक देखाउन चाहन्छन् तर कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक उमेर फरक छैन । नेतृत्वको पृष्ठभूमि फरक छैन । उनीहरूको वर्गआधार फरक छैन । मनोविज्ञान फरक छैन । शासकीय शैली फरक छैन । उत्तरदायित्वको प्रश्नमा उनीहरू समान छन् । प्रधानमन्त्रीको नाम बिर्सिने हो भने हाम्रा प्रत्येक सरकारहरू उस्तै थिए । हिजोसम्म कम्युनिस्टहरूलाई जनजीविकाका सवालमा अलिक संवेदनशील मानिन्थ्यो । कांग्रेस हिजोसम्म लोकतन्त्रको पर्याय ठानिन्थ्यो । आज न कम्युनिस्टहरू जनजीविकामा उदार देखिए न लोकतन्त्रमा कांग्रेस मात्र प्रतिबद्ध छ ।
सिद्धान्तमा के लेखियो भन्ने कुराले नेपाली राजनीतिलाई खासै फरक नपर्ने भयो । यस्तो किन छ ? वस्तुत: कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू एउटैखाले पार्टीहरू हुन् । पुराना, गतिहीन, यथास्थितिवादी, ढोंगी । यथा अवस्थामा पुराना दलहरूले नेपाली राजनीतिमा पुर्‍याउने योगदान सकियो । अब राजनीतिक दर्शन, विचार, शैली र संस्कृतिमा उनीहरूबाट कुनै योगदान हुँदैन । संगठनात्मक जीवनमा यी दलहरू उस्तैउस्तै हुन् । दुवै कुवाजस्ता । भनाइ छ, ‘दलहरू कुवाजस्तो हैन, नदीजस्तो हुनुपर्छ ।’ कुवामा पानी बासी हुन्छ । कुवामा भ्यागुताको राज हुन्छ । कुवा संकुचित हुन्छ । कुवासँग सानो क्षितिज हुन्छ । नदीमा जीवन हुन्छ । गति हुन्छ । सदैव चलायमान हुन्छ । सदैव अगाडि बढिरहन्छ । विशाल आकाश र अनन्त सम्भावना नदीका मौलिकता हुन् । दलहरूमा विचार, नेता र नेतृत्व निर्माणका लागि नदीको उदाहरण रमाइलो तर गम्भीर शिक्षा हो । ताजापन नदीको मौलिकता हो । विशालता यसको मूल चरित्र हो । निरन्तर अगाडि बढिरहनु यसको स्वभाव हो । यसले मात्र राजनीतिलाई जीवन दिन्छ । कुवाजस्तो गतिहीन पार्टीलाई बचाएर के पाइन्छ ?
एउटा चिनियाँ लोककथा छ । कथामा सिधा, इमानदार र शक्तिहीन भेडो छ । एक दिन उसले भगवान्सँग प्रार्थना गर्छ, ‘प्रभु, हामी किन यति धेरै कमजोर ? हामी ज्ञानी, सिधा र सरल पनि हुनुपर्ने अनि हामी नै शक्तिहीन पनि ? त्यो बाघ हेर्नुहोस् त, ऊ कति जण्ड, हिंस्रक र बहादुर छ । त्यसले निर्धा प्राणीहरूलाई असाध्यै दु:ख दिन्छ ।’ परमेश्वरलाई दया लाग्यो । उनले भेडालाई शक्तिशाली बनाइदिए । उसले अग्लो र लाम्चो शरीर, ठूलो मुख, धारिला दाँत अनि अगाडि फर्किएका लामा र तीखा सिङ पायो । भेडो खुब खुसी भयो । ऊ वनमा स्वतन्त्र र निर्भय विचरण गर्न थाल्यो । ऊ घमन्डले भरियो तर नयाँ ढाँचाको मुख, सिङ र दाँतले उसलाई घाँस चर्न दिएन । ऊ भोकले हैरान भयो । त्यहीबेला भेडाको छेउमा नाच्दै, खेल्दै र रमाउँदै एउटा सानो खरायो आइपुग्यो ।